ADSS cable Ihọd adịgide JS
Rụrụ nwụrụ anwụ ọgwụgwụ Ihọd adịgide, JS were developed to grip the ADSS fiber optical cable while construction of internet network lines on wood poles or concrete towers, as analog of classical wedge tension clamps. ADSS cable in applied in telecommunications, and our distribution dead ends are depended by telecom distribution and network construction companies.
ADSS preformed waya Ihọd adịgide, JS e mere nke na-ekpo ọkụ itinye kpaliri ígwè, ASTM A475 ọkọlọtọ waya mkpara.
ADSS nkesa nwụrụ anwụ na-agwụ Ihọd-adịgide adịghị achọ ka ọ bụla ngwá ọrụ maka echichi na ike ga-n'elu eriri optic cable , ozugbo. Efefe ADSS nwụrụ anwụ ọgwụgwụ JS ụdị adịghị achọ na-echebe mkpara ma ọ bụ n'akụkụ splices, ọ nwere ike arụnyere ogologo na eriri USB jaket.
The nhazi nke ADSS preformed mwekota na gbakọọ iji iwelata ntinye weere nke ìhè mgbaàmà. Ke adianade do, anyị ụlọ ọrụ emewo nnyocha ọtụtụ iche helical erughị ala grips na anyị na-enwe ike iji kwekọọ anyị waya kpụrụ nwụrụ anwụ nsọtụ gị ADSS cable size, ya dị na-arụ ọrụ ibu na elu n'obosara.
Arụ ọrụ ibu nke USB (agbasa ibu), kN
ADSS cable size, mm
Timbul, nwere ike etinyere na erughị ala ibu
Iji-05 (1-7 kN)
Iji-1 (5-10 kN)
Iji-3 (12-15 kN)
Kpọmkwem dị ka cable arụ ọrụ ibu
Jera preform akara bụ ike ịgbanwe ADSS rụrụ dị ka nkọwapụta nke ADSS USB, dị ka nke ọma, ma ọ bụ ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa maka kpọmkwem cable size na 7 ụbọchị.
Anyị dum gburugburu kpụrụ waya ngwaahịa a nwalere na kwupụtara iji mezuo ihe ndị a chọrọ nke ndị ahịa anyị.
Jera preformed nwere zuru ezu nso nke ule ngwá n'ihu ụdị ule nke helical akara ngwaahịa, preformed Ihọd adịgide nwụrụ anwụ na nsọtụ.
Anyị na-elekwasị anya na àgwà na-ezu nso nke ígwè kpụrụ Ihọd grips, nke na-agụnye: ADSS nkesa nwụrụ anwụ nsọtụ , Strand Ihọd grips ,nkwusioru grips ,galvanized ígwè n'akụkụ tie ,dobe waya nwụrụ anwụ nsọtụ ,ejima agbatị ,insulator n'elu agbatị ,agha mkpara , full erughị ala splices, thimbles, osisi oyiyi akwa (arịlịka nkpọrọ olu, bọl anya), Kpụrụ Waya ngwa , ngagharị akara damper wdg
Welcome ịkpọtụrụ anyị
Previous: Strand waya Ihọd adịgide 38I
Osote: ACSR Ihọd adịgide LJS
ADSS cable Ihọd adịgide
ADSS nkesa nwụrụ anwụ nsọtụ
ADSS Ihọd adịgide
dobe waya nwụrụ anwụ nsọtụ
eriri optic cable adịgide
Kpụrụ Waya ngwa
galvanized ígwè n'akụkụ tie
adịgide erughị ala cable
Helical adịgide maka Thailand
Helical adịgide Tụkwasịnụ America
Helical adịgide ka Canada
Helical Line Fittings maka Germanys
na-ekpo ọkụ itinye galvanized ígwè
insulator n'elu agbatị
Efefe ADSS nwụrụ anwụ ọgwụgwụ
Preformed akara ngwaahịa
gburugburu kpụrụ waya ngwaahịa
Strand Ihọd grips
nkpirikpi erughị ala clamps
waya kpụrụ nwụrụ anwụ nsọtụ
FTTH dobe cable, mesikwuru site FRP mkpara, 1 Fiber
ACSR Ihọd adịgide LJS
Strand waya Ihọd adịgide 38T
ACCC, ACSR Wraplock n'elu tie LJS-S
ACCC, ACSR Ejima n'elu tie LJS